> Resource > Video > Sida loo Split YouTube Videos qabad fiican
Ma doonaysaa in ay soo gaabin video dheer in 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo si ay u geliyaan in YouTube? Ama waxaad u baahan si ay u helaan tusmada sida aad doonayso inaad ka video YouTube ah isticmaalka waxyaabo kale? Tixgeli u sameeyeen. Article posts Tani hab degdeg ah oo degdeg ah si ay u kala jabeen wax files YouTube galay qaybaha kala duwan iyadoo la isticmaalayo Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Dhab ahaantii, video qalab kaa caawin kara kala qaybsan tahay oo keliya wixii ku saabsan video habka ah saddex tallaabo ah oo sahlan. Isku day inaad tan splitter YouTube lacag la'aan ah hadda.
Talo : Haddii aadan heli video YouTube si degdeg ah, oo kaliya la qaato Wondershare Free YouTube Video Downloader in ay la wareegaan aad videos offline la doonayo. YouTube artist playlist, YouTube Channel, YouTube Dufcaddii category downloads ayaa dhamaantood la taageeray.
1 files Import YouTube
Burcad barnaamijkan iyo dooro "4: 3" ama "16: 9" muuqa inay galaan suuqa kala hoose. Markaas riix "Import" xitaa folder file iyo shuban music videos YouTube, koorsooyin Dufcaddii. Dhammaan files muxaafidka la soo bandhigi doonaa sida thumbnails in shayga saxaarad bidix. Double guji kasta video clip si aan u daawado ee suuqa kala xaq previewing ah. Markaas jiidi oo hoos u video YouTube ah oo wuxuu galay Timeline Video ah.
Dadka isticmaala Mac, waxaad isticmaali kartaa Browser Media gundhig in la helo files ee Lugood, QuickTime ama iMovie, oo iyaga ku haboon daro.
2 Split YouTube video fudayd
Play aad video YouTube, ka dibna jiidi slide ee suuqa kala Falanqeynta in booska aad rabto in aan kala tagno, guji "hako". Markaas ka dhacay icon maqas ee toolbar ah. Hadda this video ayaa horey u kala soocay laba qaybood. Ku celi tallaabooyinka kor ku xusan in aan kala tagno clip this dhowr qaybood. Ka dibna iska saar kuwa aan la rabin inay dilaan "Delete" on keyboard ah.
Haddii aad rabto in aad hesho oo keliya bilowgii ama afjaridda qayb ka mid ah video, kaliya dhaqaaqo bar slide ee Jadwalka bilowgii ama qayb ka mid ah dhameystirka clip ah. Marka "qabsato duration" icon u muuqataa, waxa jiidin jar ka soo qayb aan la rabin in ay sii dhererka aad u jeclaystay. Haddii qalad kasta, kaliya wax miiran "Ctrl Z +" si ay u burburin lahaayeen.
Talooyin: Waxaad isticmaali kartaa zoomer waqtiga Mozilla in waqtiga inaad sooman tahay helo booska saxda ah ee dheeraad ah oo sax ah qaybsama.
3 Save the YouTube video kala
Marka aad hesho doonayay YouTube clip, guji "Abuur" si ay u dhoofiyaan. Daaqadda pop-up wax soo saarka, dooro "YouTube" tab, ku buuxi macluumaadka aad xisaabta, iyo dar baahisey horyaalka, sharaxaad iyo keywords in ay si toos geliyaan ka app this.
Sidoo kale, waxaad dooran kartaa noocyo kala duwan oo qaab doorasho u badbaadin on your computer. Dhammaan qaabab loo jecel yahay waxaa taageera, oo ay ku jiraan wmv, MOV, MP4, FLV, AVI, Mpg, MKV, iwm Just soo qaado qaab aad jeclaystay loo maqli haboon.
Talooyin: Tan iyo tan splitter YouTube badbaadin kartaa file kaliya hal mar ah, waxaad u baahan tahay oo u badbaadin doonaa in files mashruuc oo kala duwan, haddii aad qorshaynaysid in aad badbaadin qaybaha kala duwan ee clips ah. Si tan loo sameeyo, guji "Tababare File" oo dooro "Save" doorasho. Markaas file mashruuca ku shuban mar kale u badbaadin doonaa mid mid.
Sidee loo Diiwaan Online Audio la Loss Tayada No